Zụta Eplerenone ntụ ntụ (107724-20-9) HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Eplerenone ntụ ntụ (107724-20-9)
SKU: 107724-20-9. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụpọ Eplerenone (107724-20-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Eplerenone ntụ ntụ bụ onye antagonist nke aldosterone nke kachasị maka onye na-enweta mineralocorticoid karịa spironolactone, nwere njikọ ala maka progesterone, androgen, na glucocorticoid na-anabata. Iji meziwanye ndụ nke ndị ọrịa na-arịa ọrịa sistem na-arụ ọrụ nke na-eme ka a na-ahụkarị (systolic dysfunction) (ihe na-agba ọsọ <40%
Eplerenone ntụ ntụ video
Eplerenone ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Eplerenone ntụ ntụ
Ịdị ọcha: 99% min (HPLC)
Molekụla Formula: C24H30O6
Ọbara arọ: 414.49
Synonyms: ime NNNNX-ene-4-dicarboxylic acid 7,21-epoxy-9,11-hydroxy-17-oxo gamma-lactone methyl ester; EPLERENONE 3%; EPLERENONE USP STANDARD; Elperenone; EplerenoneC98H24; ime-3006-ene-4-dicarboxylic acid, 7,21-epoxy-9,11-hydroxy-17-oxo, γ-lactone, ester ester (3 α, 7, 11 α); EPLERENONE NA N-17 INTERMEDIATE; epoxymexrenone
Ihe Ị Chọrọ Ịma Na Eplerenone ntụ ntụ
Eplerenone ntụ ntụ (AASraw)
Kedu ihe bụ Eplerenone ntụ ntụ
Eplerenone ntụ ntụ bụ onye na-agbagha onye na-anabata ihe na-edozi ahụ dị ka onye na-ahụ maka mmiri dị ka diuretic spironolactone, enwere ike iji ya ma ọ bụ na ọgwụ ndị ọzọ iji mesoo ọbara mgbali elu. Ọ na-arụ ọrụ site na igbochi kemịkal (aldosterone) n'ime ahụ gị nke na - eme ka ọnụ ala sodium na mmiri ahụ dịgide. Ịdọrọ ọbara mgbali elu na-enyere aka igbochi strok, mmetụ obi na nsogbu akụrụ. A na-ejikwa ya na-emeso nkụda mmụọ obi na-esighi ike mgbe ọ na-esochi obi ọgụ. E wezụga, Eplerenone ntụ ntụ na-enyocha dị ka ọgwụgwọ maka etiti serous retinopathy.
Kedu ka e si ewepụ uzuzu Eplerenone
Jiri uzuzu Eplerenone nyere gị aka, dịka otu ugboro ma ọ bụ abụọ kwa ụbọchị. Soro ntuziaka ndị dị na aha njenye ọgwụ gị, jiri ọgwụ a na-eme mgbe niile iji nweta uru kachasị na ya. Cheta iji ya n'otu oge (s) kwa ụbọchị. Ọgwụ ahụ dabeere na ọnọdụ ahụ ike gị (ọbara mgbali elu, nkụda obi), nzaghachi na ọgwụgwọ, na ọgwụ ndị ọzọ ị nwere ike ịnara. Jide n'aka na ị ga - agwa dọkịta gị na onye na - ere ọgwụ banyere ngwaahịa niile ị na - eji (gụnyere ọgwụ ọgwụ, ọgwụ ndị na - edeghị ọgwụ, na ọgwụ ndị na - emepụta ọgwụ) .Yaịkịta gị nwere ike ịgbanwe oge gị iji jide n'aka na ị ga - enweta nsonaazụ kachasị mma. na-enweghị nri. Iji jide n'aka na ọgwụ a na-enyere ọnọdụ gị aka ma ọ bụghị na-akpata nsogbu ndị na-emerụ ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ịdee ọbara mgbali gị mgbe niile. A ga-enyocha ọkwa potassium gị dị iche iche iji nyochaa ọbara ugboro ugboro. Gaa na dọkịta gị mgbe niile.
Ọ bụrụ na a na-emeso gị maka ọbara mgbali elu, nọgide na-eji ọgwụ a ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị gị mma. Ọbara mgbali elu anaghị enwe ihe mgbaàmà ọ bụla. Ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị jiri ọgwụ mgbali elu mee ihe maka oge ndụ gị niile.
Echekwala na ụlọ okpomọkụ na mmiri na okpomọkụ.
Ịdọ aka ná ntị na Eplerenone ntụ ntụ
A ghaghị iji nlezianya mee ihe na ntụpọ eplerenone na:
ndị ọrịa nwere akụrụ ma ọ bụ ọrịa imeju, ndị na-ewere lithium (nke a na-enyekarị maka ọrịa nkwụnye ọbara), na ndị na-ewere tacrolimus ma ọ bụ ciclosporin (ejiri gbochie ịjụ mkpụrụ akụkụ mgbe a gbanwere ma ọ bụ na-emeso ọnọdụ akpụkpọ anụ dịka eczema).
E kwesịghị iji ya:
ndị ọrịa na-arịa ọrịa (Hypersensitive) na Eplerenone ntụ ntụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị na ọgwụ (dị ka lactose), ndị ọrịa nwere nnukwu potassium n'ime ọbara (hyperkalaemia), ndị nwere ọrịa akụrụngwa dị oke njọ, ndị nwere nnukwu imeju ọrịa, ụmụaka, ndị ọrịa na-aṅụ ọgwụ maka ọrịa fungal (ketoconazole ma ọ bụ itraconazole), ọgwụ ọgwụ nje nje HIV (nelfinavir ma ọ bụ ritonavir), ọgwụ nje (clarithromycin ma ọ bụ telithromycin), nefazodone maka ịda mbà n'obi, ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ iji nyere ahụ aka ụfe dị ka potassium diuretics na 'mbadamba nnu' (ihe ntinye potassium).
Tupu iwere Eplerenone ntụ ntụ, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere, maọbụ mgbe ọ bụla nwere:
Nwere akụrụ akụrụ (akụrụ ọrịa)
Mmeghari ume na ọgwụ ọ bụla
Akwa potassium dị n'ọbara gị (hyperkalemia)
akụrụ akụrụ (akwara ọrịa)
Ngwá cholesterol dị elu ma ọ bụ triglyceride
Gout (ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo nke ọkpụkpụ uric acid dị na nkwonkwo)
Ndị ọrịa na-arịa ọrịa (hypersensitive) na Eplerenone ntụ ntụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị na ọgwụ (dị ka lactose), ndị ọrịa nwere nnukwu potassium na ọbara (hyperkalaemia), ndị nwere ọrịa akụrụngwa dị oke njọ, ndị nwere oke imeju ọrịa, ụmụaka, ndị ọrịa na-aṅụ ọgwụ maka ọrịa fungal (ketoconazole ma ọ bụ itraconazole), ọgwụ ọgwụ nje nje HIV (nelfinavir ma ọ bụ ritonavir), ọgwụ nje (clarithromycin ma ọ bụ telithromycin), nefazodone maka ịda mbà n'obi, ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ iji nyere ahụ aka ụfe dị ka potassium diuretics na 'tebụl nnu' (ihe ntinye potassium)
Dọkịta gị nwere ike ịkwado ka ị na-eri nri nnu nnu n'oge ị na-agwọ Eplerenone ntụ ntụ. Soro ntuziaka ndị a nke ọma. Gwa dọkịta gị na ị na-eji ọgwụ a tupu ị nweta ụdị ọgwụgwọ ọ bụla ma ọ bụ eze. Soro dọkịta na laabu gị rụọ ọrụ niile mgbe ị na-eji Eplerenone ntụ ntụ. Onye na-ahụ maka nlekọta ahụike ga-achọ ime nyocha ugboro ugboro iji lelee nzaghachi nke ahụ gị na ọgwụ a. A gaghị eji ọgwụ ụfọdụ eme ihe na Eplerenone ntụ ntụ. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị na-ewere ihe ndị a:
Nne ime na Eplerenone ntụ ntụ
Sporanox ma ọ bụ Onmel (itraconazole)
Dyazide ma ọ bụ Maxzide (triamterene na hydrochlorothiazide)
Potassium Mmeju, ma ọ bụ nnu edozo nwere potassium
Tupu ịmalite Eplerenone ntụ ntụ, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị dị ime, ma ọ bụ mee atụmatụ ịtụrụ ime. Ị ga-ekwurịta uru na ihe ize ndụ nke ịṅụ ọgwụ a n'oge ime. Dị ka a na-amaghị ma Eplerenone ntụ ntụ ga-abanye n'ime mmiri ara ara. Emela nwa ara ka ị na-eji ọgwụ a.
Eplerenone ntụ ntụ
Eplerenone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Eplerenone ntụ ntụ si AASraw
Eplerenone ntụ ntụ Ezi ntụziaka
1 nyochaa maka Eplerenone ntụ ntụ (107724-20-9)
Eplerenone ntụ ntụ bụ ihe ọmụma